Tax on rent – isiZulu
SARS Home > Types of Tax > Personal Income Tax > Tax on rent – isiZulu
INTELA KWINGENISOMALI LOKUQASHISA NGENDLU
Kuyini ukuqashisa indawo yokuhlala?
Uma umuntu eqashisa indlu bese ethola imali, leyo mali izongena ngaphansi kohlelo lwentela.
Izindlu zokuqasha noma zokuhlala zibandakanya:
Izakhiwo zabavakashi ezingama-bed-and-breakfast
Ukuqashisa ngengxenye yomuzi wakho isib. Igumbi noma indlu engaphandle
Izindlu zokuhlala kanye
Nezinye izizinda zokuhlala ezifana nalezi.
Ibalwa kanjani intela kwingenisomali lokuqashisa ngendlu?
Imali oyithola ngokuqashisa ngendlu kufanele ingene kanye nanoma yiliphi elinye ingenisomali elithelayo olitholayo.
Noma yiyiphi imali oyitholayo ngaphezu kwerenti yanyanga zonke kufanele nayo ingene ngaphansi kwengenisomali elithelayo. Le mali engaphezulu kumbe imali yezinkokhelo zokuqasha ivamise ukukhokhwa iyisamba lapho kuqalwa isivumelwano sokuqashiselana, le mali-ke nayo ingena ekutheleni onyakeni etholakale ngawo
Imali yesibambiso ezobuya nekhokhwa yisiqashi yona kayithelelwa inqobo uma ibekwe eceleni kwi-akhawunti yeqomangcebo futhi ungeke uyisebenzise kepha uma isiqashi singeke sisayithola kumele ibanjelwe intela.
Singancishiswa yini isamba semali ethelayo?
Yebo, imali ethelelwayo (imali yerenti) ingakwazi ukwehliswa njengoba kungenzeka kube nezindleko ezakheka ngesikhathi indlu irentelwa. Yizindleko ezakheke ekwakhiweni kwaleyo nzuzomali yokuqashisa ezingafakelwa isicelo. Enye imali kanye/noma izindleko zangasese ngeke kuvunyelwe njengezinto ezingadonswa.
Yiziphi izindleko ezivunyelwe?
Izindleko ezingadonswa kwingenisomali elithelayo zibandakanya:
Ama-rates kanye nentela
Izimali ezikhokhela izikhungo zokudayisa nokuthenga imizi nezindawo
Umshwalense (owobuninimuzi hhayi owempahla yasendlini)
Izindleko zokuqasha abenzi bengadi
Izindleko zokukhanda endaweni erentisayo kanye
Izindleko zezokuvikela kanye nentela yendlu
Yiziphi izindleko ezingavunyelwe?
Ukulondoloza nokukhanda kufanele kubalulwe njengezindleko kakufanele kudidaniswe nezindleko zokuphucula. Lokhu kokugcina kuyizindleko ezinqala okufanele zibandakanywe ezindlekweni zokwakha wona umuzi, ukuze kwehlise isamba senzuzo yohwebo (kumbe ukulahlekelwa) lapho usuyichitha indlu, ngenhloso yentela yenzuzo ohwebo. Mayelana nezicelo zezindleko zeNtelantengo (VAT), ukuhlinzeka “ngophahla” kuluhwebo olungangeni kokuqondene neNtelantengo, kanjalo-ke angeke ukwazi ukubamba INtelantengo eyenzeke ngokwalezi zindleko.
Kwenzekani uma izindleko zidlula ingenisomali lerenti?
Uma izindleko zidlula ingenisomali lokuqashisa, kumele okulahlekelwe kulethwe ukuze kulinganiswe kwelinye ingeniso elizuzwe ngumninimuzi, inqobo nje uma izindleko kungezona ezibekelwe isabelo ngokuhambisana nezinhlinzeko zokungagwemeli. Ngeminye imininingwane bheka Umhlahlandlela wokubekelelwa kokulahlekelwe osekubuyekeziwe nokwenzeke ngenxa yokuhweba kokwenziwa ngumuntu.
Umninimuzi kufanele akwazi ukwenelisa u-SARS ukuthi wenza uhweba oluseqinisweni ngokuqashisa ngomuzi wakhe.
Bheka izibonelo ezilandelekayo zokukhipha izindleko.
Last Updated: 15/11/2018 9:42 AM ​